Iitshathi zedosi eziNgekho kwiintsana naBantwana
By Kendra Cherry; Ukuhlaziywa nguJudith Stewart, BPharm. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoJulayi 15, 2020.
I-ADVIL yeentsana Iilitha
IADVIL yabantwana yokuNqunyanyiswa ngomlomo
Amandla eNcinci ADVIL Chewables
Amandla Omncinci Iitafile ze-ADVIL
Sebenzisa ezi zikhokelo zedosi kwiintsana kunye nabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 ubudala.
I-Advil (ibuprofen) sisiyobisi esichasayo (i-NSAID) esetyenziselwa isiqabu sexeshana:
iintlungu ezincinci kunye neentlungu ngenxa yengqele eqhelekileyo, umkhuhlane, intloko ebuhlungu, umqala obuhlungu kunye namazinyo.
Soloko ufunda ileyibhile kwibhotile kwaye ulandele izikhokelo zokusetyenziswa ngononophelo ngaphambi kokunika idosi.
I-Advil isetyenziswa kubantu abadala kunye nabantwana abanenyanga ezi-6 ubuncinci ubudala.
Iintsana 'Inqanaba elibi
Iintsana ze-ADVIL Drops (ibuprofen 50 mg kwi-1.25 mL)
Sebenzisa isirinji ebiyelweyo kuphela eyilelwe ukusetyenziswa nale mveliso. Suku Sebenzisa nasiphi na isixhobo esisebenzisa iidosi.
Shake kakuhle ngaphambi kokusebenzisa.
Fumana idosi elungileyo kwitshathi engezantsi. Sebenzisa i ubunzima bomntwana kwidosi . Ukuba ubunzima bomntwana abufumaneki, sebenzisa ubudala bomntwana.
Khupha ulwelo kancinci ungene emlonyeni womntwana, usisidlele sangaphakathi
Ukuba kuyimfuneko, phinda umthamo rhoqo emva kweeyure eziyi-6-8, suku idosi ngaphezulu kwamaxesha ama-4 ngosuku.
phantsi kweenyanga ezi-6 buza ugqirha
Iilitha ezili-12 - i-17 lbs Iinyanga ezi-6 - iinyanga ezili-11 1.25 ml
Iilbs ezingama-18 - 23 iiponti Iinyanga ezili-12 - iinyanga ezingama-23 1.875 ml
okanye njengoko kuyalelwe ngugqirha
SUKUYISETYENZISA : eli yeza kanye kanye nasemva kotyando lwentliziyo ..
SUKUYISETYENZISA : ukuba umntwana wakho u-aleji kwi-ibuprofen, okanye ukuba ukhe wahlaselwa sisifo sombefu okanye ukusabela kakubi emva kokuthatha i-aspirin okanye i-NSAID.
EZILUMKISO EZONGEZELELWEYO kunye nolwazi oluthe kratya, nceda ubone Iintsana 'Iidrophu zokuntywila Ilebheli yeMveliso.
KWIMEKO YOKUTHOBISA , Fumana uncedo lwezonyango okanye uqhagamshelane neZiko loLawulo lweTyhefu kwi-1-800-222-1222 ngoko nangoko. Unyango olungxamisekileyo luyafuneka nokuba awuqapheli naziphi na iimpawu.
Idosi yabantwana eyingozi
Ukunqunyanyiswa komlomo womntwana nge-ADVIL (ibuprofen 100 mg kwi-5 ml)
Sebenzisa indebe yedosi ebiyelweyo kuphela, suku Sebenzisa nasiphi na isixhobo esisebenzisa iidosi.
Imigca yedosi inika ingxelo ngemveliso eseleyo kwikomityi ngenxa yobunzima bokunqunyanyiswa.
Faka ikepusi yebhotile yoqobo endaweni yokugcina uxhathiso lwabantwana.
ngaphantsi kwe-24 lbs phantsi kweminyaka emi-2 buza ugqirha
Iilitha ezingama-24 - 35 iiponti 2 iminyaka - 3 iminyaka 5 ml
Ii-36 lbs - 47 lbs Iminyaka emi-4 - emi-5 7.5 ml
Ii-48 lbs - 59 lbs Iminyaka 6 - 8 iminyaka I-10 ml
Ii-60 lbs - i-71 lbs Iminyaka eli-9 - 10 iminyaka 12.5 ml
Iipilisi ezingama-72 - 95 iilitha Iminyaka eli-11 I-15 ml
EZILUMKISO EZONGEZELELWEYO kunye nolwazi oluthe kratya, nceda ubone IADVIL yabantwana yokuNqunyanyiswa ngomlomo Ilebheli yeMveliso.
Amandla omncinci we-Advil Dosage
Amandla aJunior ADVIL Chewables (ibuprofen 100 mg)
Iilitha ezingama-24 - 35 iiponti 2 iminyaka - 3 iminyaka Ithebhulethi enye
Ii-36 lbs - 47 lbs Iminyaka emi-4 - emi-5 1 1/2 amacwecwe
Ii-48 lbs - 59 lbs Iminyaka 6 - 8 iminyaka Amacwecwe ama-2
Ii-60 lbs - i-71 lbs Iminyaka eli-9 - 10 iminyaka Iipilisi eziyi-2 1/2
Iipilisi ezingama-72 - 95 iilitha Iminyaka eli-11 Amacwecwe ama-3
Amandla Omncinci Iitafile ze-ADVIL (ibuprofen 100 mg)
Fumana idosi elungileyo kwitshathi engezantsi. Ukuba kuyenzeka, sebenzisa ubunzima kumthamo; Ngaphandle koko, sebenzisa ubudala.
Ngaphantsi kwama-48 lbs phantsi kweminyaka emi-6 buza ugqirha
Iilbs ezingama-48 - ii-71 lbs Iminyaka emi-6 - iminyaka eli-10 Amacwecwe ama-2
Okungakumbi malunga neAdvil (ibuprofen)
Thelekisa ezinye iindlela
Amaxabiso kunye neekhuphoni
23 Izinto ezithethwe ngabantu
Iklasi yeziyobisi: iziyobisi ezichasayo ezingasebenziyo
Iitshathi zeBenadryl zesilinganiselo seentsana naBantwana
Iitshathi zeclaritin idesage yabantwana neentsana
Iitshathi zeMotrin zetshathi zaBantwana naBantwana
Iitshathi zeTylenol zeDiskhi yeentsana naBantwana
Iitshathi zeZyrtec zeNtsana zaBantwana naBantwana
iziphumo ebezingalindelekanga ze vyvanse
iimeko zolusu ebusweni
luhlobo luni lwepilisi ip 109
Ngaba i-tramadol inokubangela ukulala
ukuqala ngokukhawuleza kwentlungu